chipatara - Nyambo dzino kodza mwoyo
Nyambo dzine tag 'chipatara'
pipe ye oxygen
l went to see my real friend ku hospital sezvo aisanzwa bhoo ,ndakasvikoona akaiswa pa oxygen hei hana yangu yakatanga kurova.ndakanomirawo paside pembhedha ,shamwari yangu yakabva yatora kapepa ne pen zvaainge apihwa kuti agonyorera zvaanenge achida sezvo anga asichagone kutaura ,akanyora ndokundipa ,asi ini wacho njere dzainge dzotorasika ndangoisa kapepa kaya muhomwe ndichiti hapana zvisvinu ndozonoverengera kumba. tichiripo shamwari yangu yakabva yafa
tapedza kumuradzika ,sekuru vemufi vakazonditi ko kapepa kaya kainge kakanzi chii
ndakakaburitsa semunhu aisaziva kuti kanei ndokuverenga pamwechete
"WAKATSIKA PIPE INOSUPLIER OXYGEN SHAA"
chipatara rufu murwere sahwira
Vamwe mai vakaenda koona murume wavo ainge arwara muchipatara. Vakamuigira mazai akakafraiwa zvakanzi nemurume wacho: "handisikuda akafraiwa dai mauya neakaboiliswa".
Mangwana mukadzi uya ndokuuya neakaboiliswa zvakanzi "aiwa dai mauya neakafraiwa ".
Ava mangwana acho mukadzi uya ndokuuya neakafraiwa neakaboiliswa zvakanzi nemurume wacho: "aiwa, amafraya aya dai ariwo amaboirisa aya akaboiler dai ariwo amafraya".
chipatara mukadzi mazai murume chikafu
Amai tembi na Baba tembi vakaenda kwachiremba mai tembi ndokuitwa operation zvakanzi nachiremba operation yamaitwa iyi zvotoreva kuti muchaita 2 weeks pasina bonde .
Zvakanzi na mai tembi, "mazvinzwa ka baba tembi"!
Zvakanzi nababa tembi "hongu ndazvinzwa but apa doctor arikureva imimi mai tembi."
chipatara mukadzi murume bonde
chipatara dofo mwana amai shona mukoti
chipatara doro bhawa chiremba
VaChihera vaenda kuno rapwa ku clinic
VaChihera vanodzoka from clinic vasina kurapwa. Ko sei madzoka? Zvikanzi:
"Haiwa kune dzinza rose rairapwa, ndodzokera mangwana". ldzinza ripiko Chihera?
"Ivava vemutupo unonzi NEXT nechirungu, haada kufa kurinani, vaidaidzwa ivo chete, mumwe atoda kundibatanidzira kuti ndimi next ndikati bodo ndiri Chihera ini".
chipatara chirungu chihera mutupo
chipatara baba amai zvihuta chihuta
Hondo yamasoja nama nurse muna 2016
MaNurse awuya kuipa! In return for late salary payments, varikuti Masoja, ZRP, ZPS musauya kuzvipatara kuzotora ma ARV, kwanzi muchamwa ma bullets
chipatara hondo nhamo 2016 masoja
Mwana ari kunzwei?
Amai: Shona neShangani
Amai: Nechichira chamunoona chandakamubereka nacho ichi
Amai: Kuda ibota rakavira randave kumupa mazuva ano
Amai: Anosiweta zvose nekudhota kana amwa maheu akavirisa
Nurse: Oi mapirisi aya mopa 2 pazuva
Nurse: Chibudai muende.
Masasi ekupenga - chipatara
Line rekutora maResults e HIV ku clinic ndorega rausingaite hasha chero ukapindirwa...
chipatara aids hiv/aids
ndofira munhu wehuchi
Ndasongana nevamwe mai vachitengesa huchi $3 kagaba . Ndatenga 1 chete asi semunhu anga achida hwakawanda ndabva ndati ndipei phone dzenyu kuitira kuti ndawana mari ndovafonera. Ndadzisaver mufoni kuti Honey . Nditori muchipatara so muviri wose wagochwa ...
chipatara mukadzi whatsapp godo huchi honey
Uriwe murwere unoita sei
Bamunini：kurwara kwese uku mukoma wako atadza kuuya kuzokuona here.？
Murwere ：sure baba kana nemiwo zvingaita(achikosora ropa)
Mamunini ：manje ndikamuona panhamo ndikumudzinga don't worrry .
~Uriwe murwere unoita sei